Stroller Maclaren of Techno le XLR libhekisela phezulu ekupheleni isigaba strollers.
qikelela ukuthi imininingwane, wenza kuphela ephezulu kanye okunomsoco izinto kanye izindwangu, lokhu imodeli uthethe endaweni yalo efanele uhlelo Maclaren - umenzi yokuqala emhlabeni, isicelo eziphambili zezindiza ubuchwepheshe enkulu ekwakhekeni ezokuthutha izinsana.
Classical ngoba wonke amamodeli we Maclaren Uhlaka yokwakha yenza kube nokuzinza, eguquguqukayo kanye permeability ezinhle, ukuthutha isisindo (Pleasure esihlalweni + chassis) is kancane kuka amakhilogremu eziyisikhombisa. Zonke-wheel drive ayiwele naye, rubberized, ukushaqeka wezinciphisi zinamandla ngempela, okwenza stroller ride bushelelezi, futhi kwenza kube lula ukuba uliphathe. Amabhuleki nesihluthu amasondo phambi eqinile futhi ethembekile.
Buggies Maclaren of Techno le XLR yakhelwe abantu basemadolobheni bayathanda yokuphila asebenzayo neselula. Lapho eligoqiwe, le Maclaren Techno XLR kuyinto ngempela ezihlangene. Amasondo ngokungeza amaqabunga eceleni hood, kodwa akusho ibala indwangu, uhlezi phezu abicah ingxenye visor, okungase kalula bahlanza. Izinketho Maclaren Techno XLR imodeli ngokwayo kufaka ikalishi, hood esikhiphekayo, imikhiqizo kubhasikidi, iphinifa ukushisa namakhaza, kumatilasi amabili emaceleni ngoba umntwana nge headrest, imvula, ulwelwesi ethambile ezizibeni ehlombe.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthenga bumper isikhwama esikhiphekayo izingubo zezingane, izambulela, asikhilimu-ulwelwesi isibambo futhi ezihlukahlukene nezinye izesekeli ozikhethela.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka obandayo ukuze chassis imbeleko stroller Maclaren Baby imoto esihlalweni noma Maclaren Iqembu 0+ (iyatholakala iyodwa).
On hood kuhlelwe iwindi ukuhlolwa, emaphaketheni ezimbili (textile anezikhala) izinto ezincane kanye nesigaba eyengeziwe, okuyinto kungenziwa landiswa futhi ukwandisa hood nengxenye. Ngakho, uma kunesidingo, hood uzisibekele ingane i-bumper, ukuvikelwa imvula okungazelelwe, ilanga, umoya emehlweni prying.
Model Maclaren Techno XLR alondolozwa endaweni yesiteleka, design sporty. Izindwangu ezahlukene ngokugqamile kanye neso-ekubambeni imibala: imivimbo emfushane, uphizi ukudlala, tsvetoblokami. Ngokusemthethweni ifakwe futhi izakhi ukusebenza, ezifana ifaka lembhali anikeza ukuphepha eyengeziwe ebumnyameni twilight isikhathi.
Zonke izici ze abe yendwangu ukungcola kanye umswakama oxosha enamathela, kodwa uma kunesidingo kungasuswa okugeza (imodi noma isandla ukugeza dilikatny Kunconywa ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali nolaka futhi spin mnene).
Abanikazi of strollers azokuthanda nemininingwane ezifana isibambo ukuphakama-adjustable, esikhiphekayo inkomishi umnikazi, ukhululekile esithwele isibambo stroller eligoqiwe. A 2013 imodeli enezinto eziningi ngcono: ubhasikidi liqine futhi lisithinte ngokwengeziwe bensimbi ezinhlangothini, ukufinyelela engasekelwa sebehlushwa ngisho nalapho lisalele ngokugcwele isikhundla backrest, kanye elicinene opaque visor hood oluxube lembhali.
Ngokuvamile, by okwenza kube lula, lula ukusetshenziswa kanye ukubukeka stylish, imodeli Maclaren Techno XLR kuyinto enhle kakhulu ukukhetha buggies ngoba idolobha kanye nohambo.
Mosquito inetha uzibuthe: izinzuzo kanye nezici yokusetshenziswa
"Ukungena akunakwenzeka ngenxa yeziphambeko idatha" (Skype): ukuthi yini okufanele uyenze?
Indawo yokudlela "Old Town" (Kaluga). yokudlela ethokomele nge ukuklanywa